यज्ञ बहादुर के.सी.( प्रभात)
जब मदन अश्रित मृत्युु भयो, ने.क.प.एमालेले उक्त मृत्यु लाई अस्वबाभिक षड्यन्त्र पुर्ण हत्याको आशंका गरि तत्काल दाेषी पत्ता लगाई कडा कार्बाहिको माग गर्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार र त्यसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाले आवश्यक छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्दा समेत एमालेले धैर्य नगरी अन्दोलनको घोषणा गर्यो । उक्त हत्याकाण्डको दोषि नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला हो भन्न समेत मन्चमा पछि परेनन। फलस्वरूप उक्त अन्दोलनमा झन्डै १ दर्जन मान्छेहरुले ज्यान जोखिममा हाल्नु पर्यो । बिडम्बना ! आज राज्यको सर्बोच्च पदमा मदनकि धर्मपत्नी आसिन हुनुहुन्छ । साथै मदन भण्डारीले ल्याएकाे जवजलाई देखाएर राजनीति गरिरहेका सहकर्मी खड्क प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । राज्यको सर्बाधिकार उहाहरूकै पार्टीको हातमा छ । म बबुरो समेत उक्त अन्दोलनको बाल सिपाहि जस्तो भएर अन्दोलनको योजनाअनुसार मैले पढ्ने स्कुल एक्लै बन्द गराएको थिएं । हिजो नेपाली कांग्रेसलाई आरोप लगाउदा र आज राज्यको सर्बाधिकार आफुमा हुदांको फरक भन्दिनु पर्यो । एमाले मित्रहरु अर्को कुरा दाशढुगां हत्या हो वा दुर्घटना प्रस्ट भन्दिनु पर्यो । यदि हत्याकाण्ड हो भने तत्काल दोषी पत्ता लगाई कार्बाहि प्रकृयाअगाडि बडाईयोस। होईन भने आफ्नो राजनीति अपरिपक्कता प्रति क्षमा यचना गरि गल्ती सच्चाईयोस । यसैमा भलाइ छ।आशा छ, हिजो बोले बमोजिम मदन- आश्रितले न्याय पाउनु हुनेछ । अन्यथा आफ्नै नेतालाई न्याय दिन नसकेको पार्टी र सरकारले जनतालाई के देला ? फेरि पनि आदरणिय मदन-आश्रित प्रति भाबपुर्ण श्रद्धाञ्जली !